Maso Mivadibadika Miandrandra Lanitra, Namaky ny Fahanginana Tao Amin’ny Tranonkala Shinoa Faran’izay Voaporitry ny Sivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2018 3:14 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, Deutsch, русский, English
Pkantsary nalaina tamin'ny CCTV.
Nandritra ny tapabolana voalohany tamin'ny volana Martsa, niasa hanafoana ilay fepotoam-piasana voafetra ho roa iasàn'ny filoha ny Kaongresy Nasiônaly Shinoa (NPC).
Miaraka amin'ity hetsika ity, napetrak'ireo mpanivana ny aterineto shinoa ireo fepetra henjana hanakanana ny mpampiasa serasera mba tsy haneho hevitra momba ireo fanovàna ifotony atao amin'ny lalàmpanorenana, ary hitazonana ny firindràn'ny fiarahamonina — farafaharatsiny amin'ny endriny ety ivelany
Nefa vakin'ireo hery virtoaly izay fahanginana an-tery izay, taorian'ny naharaketan'ny fakantsary mivantana avy ao amin'ny antsafa ho an'ny gazety tao amin'ny kaongresy an'i Liang Xiangyi , ilay mpanangona vaovao, nampiakatra sy namadibadika ny masony sady nanao tarehy ratsy taminà mpanangona vaovao iray hafa, Zhang Huijun, izay nametraka fanontaniana lavabe momba ny tetikasa ‘Fehikibo Tokana, Làlana Tokana – na ilay làlana vaovaon'ny lamba lasoà. Ilay antsafa nalefa tao amin'ny Fahitalavitra Foibe ao amin'ny firenena tamin'ny 13 March 2018.
Taty aoriana kely, tafaporitsaka tety anaty aterineto ny fifampiresahana nifanaovan'i Liang sy iray hafa mpiaramiasa aminy. Tao anatin'io, nilaza i Liang fa noheveriny hoe ” adala ilay vehivavy teo anilako.”
Azo ambara ho teo noho eo, niparitaka ho toy ny valanaretina tety anaty tambajotra sosialy ireo ampahantsary sy pikantsary misy ny endrika marikivin'i Liang ary an'aliny maro ireo mpisera no nalaky tamin'ny fanarahana ny kaontin'i Liang tao amin'ny Weibo, nidera azy tamin'izay fanehoany teo noho eo ny tao am-pony izay. Niparitaka toy ny afo ireo sary mahatsikaiky ahitàna fampiakarana sy famadibadihana maso — mandra-pizaràn'ireo manampahefana mpanao ny sivana ilay fampitandremana mandràra ny firesahana maso miakatra ety anaty aterineto….
Inona no voasivana?
Fa inona no voasivana amin'izao fotoana izao e? Ireto ny sasany amin'ireo fomba fiteny ao amin'ny Weibo izay hazain'ireo manampahefan'ny aterineto, araka ny naelin'i @Yorkson tao amin'ny Twitter:
“Nanome ahy voamaso mainty ny haizin'ny alina, saingy ny hany azoko natao dia ny namadibadika ny masoko.”
“Nandavo ny firenena sy nahababo izao tontolo izao ny fotsy mangatsangatsaky ny masoko.”
“Tsy nomena fahafahana haneho hevitra, saingy nipi-maso ireo olona fahiny mba ho fampitàna hafatra miafina. Ao anatin'ny vanimpotoana vaovao, ananantsika ny fahafahana mamadibadika maso.”
“Samy namadibadika ny masony ny rehetra, saingy tsy ampy ny fakantsary handraketana ireo maso rehetra navadibadika.”
“Ny maso fotsy no manja indrindra eo ambony tava feno ankosotra, asehon'ny maso ny fehezan-kenatra tsy misy fahamaotinana izay tsy misy tàvany.”
Ireo fomba fiteny rehetra etsy ambony ireo dia naneho ny tsy hafaliana noho ny fanivànana ilay tranga. Hatramin'ny nipoahan'ny vaovao, momba ny fanitsiana ny fepotoam-pitondran'ny filohampirenena noferan'ny lalàmpanorenana, dia voasivana tety anaty aterineto daholo ireo teny sy fehezanteny rehetra mifandraika amin'ilay fanitsiana.
Hatrany ampiandohan'ny Martsa, namoaka torolàlana ireo rantsana mpanao fampielezankevitra — ny fihaonana isantaona fanaon'ny NPC sy ny Kaonferansa Fakankevitry ny Kaongresy Nasiônaly Shinoa (CPPCC) ao Beijing — mba hiantohana mandritra ireo “Fotoam-pivoriana Roa” ny hoe tsy hahita hirika ireo fanehoankevitra manakiana, na eny anatin'ireo gazety mahazatra, na ety anaty aterineto .
Araka ny nandrasana, nolanian‘ny NPC ilay fanitsiana ny lalàm-panorenana, fanitsiana izay manomana ny làlan'ny filoha amperinasa Xi Jinping ho mpitondra firenena mandram-pahafatiny. Toy ny nirindra ny zavatra rehetra nandritra ireo “Fotoam-pivoriana Roa”, mandra-pisian'ilay Liang namadibadika ny masony nalefan'ny CCTV tamin'ny 13 Martsa.
Lazain'ny tatitra iray tsy voamarina naelin'ny Apple Daily fa nahantona ny fahazoandàlana hanao gazety an'i Liang ary noraràna izy tsy hanatrika intsony ireo tafatafa ifanaovana amin'ny mpanao gazety mandritra ireo Fotoam-Pivoriana Roa.
Na tsy teo aza izy, mitohy mivadibadika ny masony, farafaharatsiny tety anaty aterineto. Nidera ireo maso nivadibadika i @changhan327 noho ny nanabaribariany ny marina taminà fotoana iray:
Miezinezina tsy nisy toa azy ireo maso roa nivadibadika. Niteraka ny fihomehezan'ny olona io ary nandrodana ilay tempoly masin'ireo zavatra nokolokoloina fatratra sy narantiranty. Toy ny tsindrom-paingotra eo amin'ny vatam-pen'ny vanimpotoana ilay izy, voalavo iray mihazakazaka mamakivaky ny efitrano fihinanam-be. Ho lasa tsy misy toa azy io maso roa mivadibadika io, raha ho drodroka kosa ireo nanandran-tena ho tsy misy toa azy. Toy ny tsela-baratra nandrava fanehoankevitra an'arivony maro nideràna ary manakona ireo kabary nataon'ireo olona an'arivony maty atidoha. Ny tantara no hankalaza azy.
Vaky barara ny fitaovan'ny shinoa avy any ivelany
Tsy hehy ihany no aingam-panahy naterak'ireo maso nivadibadika. Tato anatin'ny andro vitsy, nanomboka notrandrahan'ny olona ny maha-izy azy sy ny tantaram-piainana niavian'i Zhang Huijun, ilay mpanangona vaovao nanaovan'i Liang tarehy ratsy. Milaza ny tenany ho talen'ny fahitalavitra American Multimedia Television (AMTV) i Zhang ary nankafy ireo 45 segondra nametrahana fanontaniana nalefa tao amin'ny CCTV avy amin'ilay tafa ho an'ny gazety.
Toa efa nisolo tena fampahalalambaovao vahiny marobe nandritra ny Fotoam-Pivoriana Roa i Zhang hatramin'ny 2011. Ireo mpisera ety amin'ny aterineto nitsakaraka momba ny fiavian'ilay fantsom-pahitalavitra dia tonga tamin'ny fanaovana tsoakevitra iray hoe ny AMTV dia toy ny sampana any ampitan-dranomasina an'ilay fitaovana fampielezankevitr'i Shina. Natomboka ny fanangonantsonia tao amin'ny tranonkala fanangonantsonian'ny Trano Fotsy Amerikana nitakiana ny hisian'ny fanadihadiana lalindalina kokoa momba io trano mpamoaka vaovao io:
Inoanay fa ny AMTV dia toy ny masoivoho iray tsy voasoratra anarana ao amin'ny Departemantan'ny Antoko Kaominista ao Shina sy rantsana miafin'ny China Central Television (CCTV).
Mifampiraharaha ireo mpanangona vaovaon'ny AMTV sy ireo manampahefana izay mamaly ny fanontanian-dry zareo efa nomanina sy nekena mialoha ampiarahana amin'ireo fitaovana fampielezankevitra, raha sady miezaka ihany miala ny tena fanontaniana avy amin'ireo fampahalalambaovao tsy miankina. Mampita ireo lainga avy amin'ny governemanta sy ireo fomba fijery manohitra ny amerikana ireo fandaharana alefany ho an'ireo olona miteny Mandarina any amin'ny tany Amerikana.
Miainga amin'ilay Lalàna Fisoratana Anarana ho an'ireo Iraka Vahiny, angatahanay ny hanaovana fanadihadiana momba ny famatsiana vola azy sy ny fiarahany miasa amin'ny CPC ary ny fanakatonana azy raha hita fa nanitsakitsaka ny lalàna izy.
Raha ny marina, i Jason Quin, filohan'ny AMTV amin'izao fotoana izao, izay ny mombamomba azy ao amin'ny LinkedIn dia milaza fa izy no filohan'ny Ivontoerana Fanabeazana Conficius — sampana iray mahazo famatsiambola avy amin'ny governemanta shinoa mifamatotra mivantana amin'ny Departemantan'ny Mandatehezany Miray.
Fa izao, izay teny rehetra mifandraika amin'ny maso nivadibadik'ilay mpanangona vaovao dia mbola voasivana foana ety anaty aterineto. Saingy manomboka eto, hitondra dikany iray vaovao fanampiny ho an'ireo mpanao gazety mpandalina sy mpahay ny resaka politika sy ireo mpiseran'ny aterineto ao Shina ny famadibadihan'ny olona iray ny masony.